के म तेरो परमेश्‍वर हुँ? के म तेरो राजा हुँ? के तैँले मलाई तँभित्र साँच्‍चै शासन गर्न दिएको छस्? तैँले आफैभित्र राम्ररी यो कुराको मनन गर्नुपर्छ: के नयाँ ज्योति आउँदा तैँले यसलाई अनुसन्धान र अस्वीकार गरेर, यसलाई नपछ्याइकन तैँले रोकिने काम गरिनस् र? यसका लागि, तैँले न्याय भोग्नुपर्छ र तेरो विनाशसम्म झर्नुपर्छ; तँलाई फलामको डन्डीले न्याय र सजाय दिइनेछ, र तैँले पवित्र आत्माको कार्यको अनुभव गर्नेछैनस्। चाँडै नै, तँ आराधनामा चिच्याउँदै रुनेछस् र घुँडा टेक्नेछस्। मैले तिमीहरूलाई सधैँ भनेको छु र म तिमीहरूसँग सधैँ बोलेको छु; मैले तिमीहरूबाट मेरा वचनहरू कहिल्यै रोकेको छैन। पहिलेको कुरा सम्झी: तँलाई कुनै कुरा भन्नका लागि के म कहिल्यै विफल भएको छु? तथापि, केही मानिसहरू यस्ता छन् जो हठी भई गलत तरिकाले काम गरिरहन्छन्। तिनीहरू सूर्यलाई नै ढाक्‍ने शङ्काहरूको बादलमा हराएका छन्, र तिनीहरूले कहिल्यै ज्योति देख्दैनन्। के यो तिनीहरूको “आत्म” बोध एकदमै बलियो र तिनीहरूको आफ्नै धारणा एकदमै ठूलो भएकाले होइन? कहिलेदेखि तैँले मप्रति कुनै चिन्ता गर्न थालिस्? कहिलेदेखि तेरो हृदयमा मेरो लागि स्थान हुनथाल्यो? जब तँ असफल भएको हुन्छस्, जब तैँले आफूलाई असमर्थ पाउँछस्, र जब तेरा सम्पूर्ण विकल्पहरू सकिन्छन्, तब मात्र तैँले मेरो प्रार्थना गर्छस्। त्यसो भए: अहिले पनि तँ किन आफै काम गर्दैनस्? हे मानव हो! तँलाई बरबाद गर्ने तेरो पुरानो मनुष्यताले नै हो!
कतिपय मानिसहरूले मार्ग भेट्टाउन सक्दैनन्, र तिनीहरूले नयाँ ज्योतिअनुरूप आफ्नो गति कायम राख्न सक्दैनन्। तिनीहरूले आफूले पहिले देखेका कुराहरूका बारेमा मात्रै सङ्गति गर्छन्; तिनीहरूका लागि केही पनि नयाँ हुँदैन। यस्तो किन हुन्छ? तँ आफूभित्र आफै जिउँछस् र तैँले मेरो लागि ढोका बन्द गरेको छस्। पवित्र आत्माको काम गर्ने विधिमा भएको परिवर्तन हेर्दा, तेरो हृदयमा, तँ गलत पो भइन्छ कि भनेर सधैँ सतर्क रहन्छस्। परमेश्‍वरका लागि तेरो सम्मान कहाँ छ? के तैँले यसलाई परमेश्‍वरको उपस्थितिको शान्त अवस्थामा खोजेको छस्? तँ यस्तो विचार मात्रै गर्छस्, “के पवित्र आत्माले साँच्‍चै त्यसरी नै काम गर्नुहुन्छ?” केही मानिसहरूले देखेको भनेको पवित्र आत्माको कार्य हो, तैपनि यसको बारेमा तिनीहरूसँग भन्ने कुरा अझै हुन्छ; अरूले यो परमेश्‍वरको वचन हो भनेर स्वीकार गरेका हुन्छन्, तैपनि तिनीहरूले वचन स्वीकार गरेका हुँदैनन्। तिनीहरू प्रत्येकमा विभिन्न भावनाहरू उठिरहेका हुन्छन्, र तिनीहरूले पवित्र आत्माको कार्यलाई बुझ्दैनन्। तिनीहरू असावधान र लापर्बाही हुन्छन्, र मूल्य चुकाउन र मेरो उपस्थितिमा एकाग्र हुन अनिच्छुक हुन्छन्। पवित्र आत्माले तिनीहरूलाई अन्तर्दृष्टि दिनुभएको हुन्छ, तर सङ्गति गर्न र खोजी गर्न तिनीहरू मेरो अघि आउनेछैनन्। बरु, तिनीहरूले आफूलाई जे मन पर्छ त्यही गर्दै, आफ्नै इच्‍छाहरूलाई पछ्याउँछन्। यो कस्तो प्रकारको अभिप्राय हो?
परमेश्‍वरको धर्मी स्वभावतिमीहरूले परमेश्‍वरको अख्तियारको बारेमा रहेको अघिल्‍लो सङ्गति सुनिसकेका हुनाले, म आश्‍वस्त छु कि तिमीहरू यस विषयमा...